Chii chiri chitsva oneworld chinongedzera chakawedzerwa ndege yendege?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Chii chiri chitsva oneworld chinongedzera chakawedzerwa ndege yendege?
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Fiji Breaking Nhau • Dhinda Zviziviso • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Ndege yekutanga kujoina muprojekti nyowani yenyika yekubatanidza semubatsiri ichave Fiji Airways. Oneworld® nhasi yaparura chikuva chitsva chekubatanidza kusvika kumubatanidzwa wenhandare yendege.
Ichi chirongwa chitsva chingave chakakosha nhanho yekukudziridza oneworld network.
mumwenyika batanidza ndiyo yekutanga mitezo mitezo mitsva yakafumurwa na mumweworld kubva mubatanidzwa wakatanga kuziviswa makore makumi maviri apfuura.
mumwenyika iri mukukurukurirana nevamwe vatakuri vanofarira kutora chikamu muchirongwa ichi, kubva kumatunhu akasiyana epasi kusanganisira maAmerican, Asia-Pacific uye Europe.
chimwe nechimwe mumwenyika batanidza mumwe wako anofanirwa kuve neashoma matatu mumwenhengo dzenyika seyayo Sponsors kutanga muchirongwa. Chekutanga mumwenyika Sponsors yeFiji Airways ichave ese mana mumwenhengo dzekutanga dzenyika - American Airlines, British Airways, Cathay Pacific neQantas. Mutakuri weAustralia achawedzera Fiji Airways kuburikidza nayo mumwenyika batanidza kuita maitiro.
American Airlines, Cathay Pacific neQantas vatove nekodhi-mugove uye vanowanzo kuve vanobhururuka nendege neFiji Airways. British Airways neFiji Airways parizvino vari kukurukura nzvimbo dzekudyidzana kwenyika mbiri.
Izvo zvakanakira vafambi vemhepo vanogona kupfupikiswa se:
Kubudikidza nekutarisa-kwevatakuri nemikwende yavo yenzendo dzinosanganisira kubatana pakati pe batanidza inotakura uye chero chayo mumwevatsigiri venyika.
Iko kugona kuwana uye kudzikunura kazhinji mubayiro wemapepa, uye kuwana kazhinji maficha mamiriro mamiriro, kune akakodzera ndege. (Kune vatengi kubva mumwenyika batanidza ndege, izvi zvakanaka zvinoenderana ne mumwenyika batanidza shamwari inopa chirongwa chinowanzoitika.)
Kuwanika kusarudza mamalounge panhandare dzakakosha dzeVokutanga kana Bhizinesi Kirasi vafambi kana avo vane inokodzera yepamusoro-tier inowanzo shambadziro.
mumwenyika Sachigaro weDare Rinodzora Pekka Vauramo, CEO weFinnair, akati: “Mumakore makumi maviri kubvira mumwekubata kwepasi rose muna1998, mubatanidzwa wenhandare dzendege wepasi rose wakawedzera hupamhi kusvika padanho rekuti ivo zvino vaverengera makumi matanhatu muzana muzana emari inowanwa mumaindasitiri nekwaniso pasirese, uye makumi manomwe kubva muzana muzana yemari iri pakati pendege dzepasirose 60 dzemabhizimusi eguta.
"Nendege zhinji dzenyika dzakatosaina, mubatanidzwa wenhandare dzendege wasvika mukukura, Mune ramangwana, mumweNyika ino tarisa senhengo dzakazara nendege huru dzine hupo hwakakosha mumubatanidzwa wekutanga wemusika, zvichipa kubatana pakati penzvimbo dzemabhizimusi anotungamira epasi rose. Panguva ino, mumwenyika batanidza inoita kuti tikwanise kuunza pamwe ndege zhinji kuti dzizadzise vatungamiriri venyika, saka vatengi vanogona kuwana mibairo uye vanzwe kuzivikanwa pavanenge vachitofamba. ”
mumwenyika CEO Rob Gurney akawedzera kuti: “mumwenyika iripo parizvino yenzvimbo dzinopfuura chiuru munzvimbo dzinosvika zana nemakumi mashanu pamwe nenzvimbo dzinopa kufukidzwa kwepasirese, asi kuchine mamwe matunhu atinoda kusimbisa kuvepo kwedu mberi. Nevashoma vangangoita vavhoterwa vatsva vanowanikwa kutora nekuda kwehunhu hwedu hwehunhu, mumwenyika batanidza inoita kuti tikwanise kubatana nemamwe maairlines ane netiweki akakodzera kune subset yenhengo dzedu, dzisingakwanise kusangana mumwenyika izere nehunhengo zvinodiwa padanho rino kana vasina hanya nenhengo dzakazara parizvino.
"Izvi zvinoita kuti isu pamwe navo vape vatengi vedu mamwe masevhisi uye mabhenefiti kune yakatowanda netiweki uye kusimbisa hukama hwedu kuenda kumberi, nenzira yakarongeka uye inokurumidza kuve nhengo izere gare gare pazvinonzwisisika kumapati ese."
Kuunza oneworld connect - nzira nyowani yendege dzekubatanidza kune yepasirose mubatanidzwa (PRNewsfoto / Fiji Airways)
Fiji Airways CEO Andre Viljoen yakati: “Fiji Airways inofara uye inokudzwa kuva wekutanga mumwenyika batanidza mudiwa wepasi rose. Isu tinofara kubatanidza Fiji, uye South Pacific kumubatanidzwa wepasi rose wenhandare yendege uye nekuwedzera kudzamisa hukama hwedu kunyanya neQantas, American Airlines, British Airways neCathay Pacific. Iyi nhanho yakakosha yendege yedu inoita kuti tikwanise kupa mamwe masevhisi uye mabhenefiti kune vatengi vedu pachedu pamwe nevamwe vari mu mumwemhuri yepasi rose, kuti ivepo nekukwira kukuru kunhandare yendege yedu pasi rose uye nekuvaka pane kushanya kwakabatana kunokosha kwazvo kurudzi rwedu nedunhu redu. "
Qantas Boka CEO Alan Joyce yakati: “Se mumweNhengo yekutanga nyika, zvakanaka kuona mubatanidzwa uchichinja kuti uunze mabhenefiti kune vamwe vatengi uye nekuwedzera kubatana kwayo. Takashanda padhuze neFiji Airways kwemakore mazhinji uye tinofara kushanda semurairidzi wayo sezvazvinouya mukombi seyekutanga mumwenyika batanidzashamwari. ”
American Airlines Sachigaro uye CEO Doug parker akawedzera kuti: “Semumwe mumwenhengo inotanga pasi rose, American Airlines iri kufara kutamba chikamu chedu mukuvandudzwa kukuru kweichi chave mubatanidzwa wepamberi wenhandare dzendege, izvozvi zvave kuita kuti kuSouth Pacific kukwezve kupfuura nakare kose. ”
British Airways Sachigaro uye CEO Alex Cruz yakati: “British Airways inotarisira kutanga hukama neFiji Airways se mumwenyika batanidza shamwari uye mupinduriri, kuti tibatsirwe nendege dzedu mbiri, vatengi vedu uye neupamhi mumwenzanga yenyika yose. ”
Cathay Pacific Chief Executive Officer Rupert Hogg akagumisa, kuti: “Cathay Pacific aidada nokutamba rutivi rwedu mukuvambwa mumwepasi rose makore makumi maviri apfuura uye kuchisimbisa semubatanidzwa wemhando yepamusoro - uye isu tinodada nhasi kuti tiri kutamba chikamu chedu zvakare mukuwana iyi inonakidza nhengo mitezo mumwenyika batanidza kubva pasi, semubatsiri wekambani yedu yakareba-kodhi-share partner Fiji Airways.
Oneworld inogona kunge ichidzidza kubva kunetseka kwekushandas.